XOG CUSUB: Matthijs De Ligt Oo 19 Sano Jir Ku Taajiraya, Mulkiilaha PSG Oo Guri 17 Milyan Ah Badhtamaha Paris Ka Siinaya & Goorta Uu Qabsoomi Doono Shir Loogu Quus Goynayo Barcelona Iyo Man United | Laacib.net
XOG CUSUB: Matthijs De Ligt Oo 19 Sano Jir Ku Taajiraya, Mulkiilaha PSG Oo Guri 17 Milyan Ah Badhtamaha Paris Ka Siinaya & Goorta Uu Qabsoomi Doono Shir Loogu Quus Goynayo Barcelona Iyo Man United
June 12, 2019 Apdihaken Omer Adem 0
Waxa meel xasaasi ah maraya heshiiska ay kooxaha badani daba ordayaan ee Matthijs De Ligt oo la filayo in ugu dambayn ay kooxi ku guuleysan doonto kaddib markii uu da’yarkani si rasmi ah usoo dhammaystay xilli ciyaareedkii 2018-19.
Kooxo badan oo ay ugu magac dheer yihiin Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United, Bayern Munich, Juventus iyo Liverpool waana sababta adkaysay in kooxi si sahlan kula wareegto.
Saxaafada kala duwan ee caalamka ayaa marar badan wax ka qoray wararka De Ligt iyadoo dhawr jeer la sheegay inuu ku dhaw yahay kooxaha Man United iyo Barcelona balse warka ayaa haatan markale is bedelay.
Paris Saint-Germain oo awoodeeda ugu badan ee ay ku dagaalamaysaa tahay mid dhaqaale ayaa haatan hoggaanka u haysa saxeexiisa sida lasoo xigtay.
Mulkiilaha kooxdaas oo ah maal-qabeenka carbeed ee Nasser Al-Khelaifi ayaa la sheegayaa inuu guri ku qiimaysan 17 Milyan oo badhtamaha magaalada Paris ku yaala qaab lacag la’aan ah kusiin doono da’yarkan.
Intaa waxa dheer in Nasser uu wakiilka da’yarkan ee Mino Raiola siin doono 4,7 Milyan guno ah oo u dheer lacagta uu heshiiska ku helayo.
Raiola ayaa haatan ku sugan caasimada France waxaana la filayaa isla maanta shir la qaato madaxda sarre ee Paris Saint-Germain si ay u dhammaystiraan heshiiska da’yarkan.
Wakiilkan oo ah ninka go’aanka ugu weyn ka gaadhaya mustaqbalka De Ligt ayaa hore ula soo kulmay madaxda kala duwan ee Barcelona iyo Manchester United balse aan wax heshiis ah oo qanciya ka helin.